Muuqaal Aan Af Soomaali Ka Dhignay: Sheeko Xiiso Badan Oo Dhex Martay Nin Faqiir Ahaa Oo Gaari Ay Laheyd Gabar Uu Shukaansan Rabay U Sheegay Inuu Isaga Leeyahay, Maxaa Qabsaday!! - Hablaha Media Network
Muuqaal Aan Af Soomaali Ka Dhignay: Sheeko Xiiso Badan Oo Dhex Martay Nin Faqiir Ahaa Oo Gaari Ay Laheyd Gabar Uu Shukaansan Rabay U Sheegay Inuu Isaga Leeyahay, Maxaa Qabsaday!!
HMN:- Inta badan nimanka ayaa aamisan in habka ugu fudud ee gabadhaha lagu shukaansan karo ay tahay in la isaga dhigo Nin hantiile ah si ay usoo jiitaan.
Haddaba Nin u dhashay Dalka USA ayaa isku dayey inuu ku shukaansado baabuur ay iyada laheyd.
Ninkaan oo taagan Laami uu yaalay gaari Buluug ah ayaa waxaa meesha timaaday gabadhii laheyd Gaariga, wuxuuna bilaabay inuu shukansado, Haddaba shirkada filimside.net ayaa idiin soo turjuntay sheekada muuqaalkaan ku dhexmartay labadaan qof, waxaana fasirnay carabiga hoos kusoo qormayo.
Wiilka: Soo Dhawaaw Sidee tahay?
Gabadha: Waa Fiicanahay, Maxaay Kaa cusub?
Wiilka: Meeshaan maad Iska Socotay, Mise?
Gabadha: Maya Hooyadeey Aan Sugayaa.
Wiilka: Las Vegas miyaad ka timid?
Wiilka: Halkee Adiga ka Timid?
Gabadha: Waxaan Ka Imid Yurub.
Wiilka: Waaw fiican.
Gabadha: Hagaag, waxaa waajib kugu ah inaad mar soo booqato, miyeysan sidaas aheyn?
Wiilka: Ilaa Goorma ayaad inta joogeysaa
Gabadha: Ilaa Berri
Wiilka: Ok hadaad beri baxeyso
Wiilka: Waxaan rabaa inaan meelahaan Cabitaan u doonto, ma raaceysaa dhaqso ayaa kusoo celinayaa?
Gabadha: Sidaan horey kuugu sheegay, waxaan sugayaa hooyo oo 5-10 daqiiqo kadib ii imaaneyso.
Gabadha: Ee Baabuurkaan, ma adigaa iska leh?
Wiilka: Haa Anigaa iska leh.
Gabadha: Waaw Waa Arrin Fiican, runtii noloshaada Guul ayaad ka gaartay.
Wiilka: Macquul ma tahay inaad nambarkaaga isiiso, si aan marka labaad ee aad soo laabato gaariga kuugu qaado?
Gabadha: Ma Hubtaa? Maxaa diidayo inaan ku siiyo?
Gabadha: Waan baarayaa Sug, ma aqaan nambarkaan waa ku cusubahay dalka, waa kanaa waa nambarkeyga mareekanka.
Gabadha: Waaw, Hooyo ayaa farriin iisoo qortay, waxay dhahday 10 daqiiqo waan kaasoo daahayaa, Soo Bax aan soo baashaalno, hadaad diyaar tahay?
Wiilka: Waan sameyna karnaa midaas, balse furaha baabuurka ayaan uga soo tagay saaxiibadey, way imaanayaan aan sugno.
Gabadha: Waaw Hagaag
Wiilka: dhabtii waan sugayaa, furaha ayaan ka qaadayaa markaas dambna waan is raaceynaa, aniga inta badan waxaa jeclahay inaad qaato gaariga ay soo saartay shirkadda Baabuurta Ferrari kaasoo ah Bonnie, balse hadda waxaa wataa Stallion.
Gabadha: Waa Kan Furaha gaariga!!!!
Wiilkii: Waaw, gaarigaaga Miyaa?!! Runtii Arrintana waa mid aad Ceeb u ah.
Gabadhi: Waa Beenlow Kawaran
Haddaba Gabadhii ayaa gaarigeeda iska kaxeysatay, halka ninkii uu ceeb dartiis meesha uga baxsaday!!
Haddab aqriste sheekadana sidee u aragtaaa.